HOW TO BYPASS SURVEYS - .::just for share::.
Home » survey » HOW TO BYPASS SURVEYS
ပထမဆုံး ဒီပို့ စ်က FB ပေါ်ကတွေ့ လာတာပါ ကိုမင်းသိန်း ကို credit ပေးပါတယ် :)
Suggested Post:-Bug in Viber App which allows you to Bypass android Screen Lock
Black Magic December 25, 2013 at 8:23 AM
Bro ကျွန်တော် Survey ကျော်တဲ့ နည်းတွေ Site တွေ Plug-in တွေ Software တွေ တော်တော်များများ..၊ သုံးဖူးပါတယ်..၊
တစ်ခုမှမရသေးပါဘူး..၊ Surely ရတာတစ်ခုခုများရှိမလား Bro.. :)